सहकार्यका मोडालिटी कस्ता होलान् ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ–राजेन्द्र श्रेष्ठ
दाहाल र नेपालसँगको भेटवार्ताबारे श्रेष्ठले यसरी सुनाए
हिजो म र नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुसँग कसरी जान सकिन्छ ? भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी भएको थियो । र, आज चाहीँ औपचारिक रुपमा कुराकानी भएको छ । आज चाहीँ दुई पार्टीको बीचमा औपचारिक वार्ता भयो । वार्तामा नेकपाको तर्फबाट कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल दुवै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र म गरी तीन जना थियौं । वार्तामा प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेड दुवैले आजको सन्दर्भमा हामीले चाहेपनि नचाहेपनि एउटा नयाँ ढंगले बढ्नुपर्ने आवश्यकत्ता यो देशले नै निर्माण गर्यो ।
नकारात्मक काम गरेर केपीले यो संसद विघटन गर्यो, त्यसको सकारात्मक परीणाम चाहीँ संसद पूनःस्थापना भएर सहकार्यको वातावरण बन्ने स्थिति आउँदैछ, हामीले सडकमा आ–आफ्नो ढंगले, आफ्ै पाराले, नेपाली कांग्रेसपनि सडकमा उत्रियो, यो प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरामा कांग्रेस पनि निस्कियो । हामी पनि त्यसैगरि निस्कियौं । जनता समाजवादी पार्टीले पनि त्यही धारणा राखेर सडकमा आयो, यस हिसाबले तीनवटै पार्टी आफ्नो ठाउँबाट सडकमा उत्रियो, कार्यगत रुपमा हेर्दाखेरि एउटा मोर्चा नबनेपनि आफ्नो ठाउँबाट हामी एकै ठाउँमा पुग्यौं । त्यसकारण यो नकारात्मक प्रवृत्तिबाट हामी सकारात्मक ठाउँमा पुग्यौं भन्ने कुरा उहाँहरुले गर्दै अब नयाँ स्थितिमा हामीले पूनः संयुक्त भएर जाने वातावरण बनाउनुपर्यो । अविश्वासका प्रस्तावमा मिलेर जाऔं ।
संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव राखौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरौं । सरकारमा पनि मिलेरै जाऔं । दुई वर्षभित्र देशका सबै समस्या हल गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हिजोपनि मसँग त्यही प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
मुख्य कुरा के हो भने हिजोदेखि हामीले गर्दै आएका क्रियाकलापहरु, दलहरुको एजेण्डा छन् । सहकार्यका मोडालिटी कस्ता होलान् ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । समिकरण प्राकृतिक हुनुपर्छ । असैद्धान्तिक र अप्राकृतिक गठबन्धन गर्यो भने आज फेरि सत्ताको लागि गठबन्धन हुन्छ ।
फेरि त्यो टुटछ । त्यसैले हाम्रो चाहीँ जोड के हो भने कुनैपनि गठबन्धन गर्दा प्राकृतिक हुनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन स्विकार्य हुनुपर्यो । पहिचानसहितको संघीय शासनको कुरा गर्छौं । समानूपातिकक समावेशीमा केही केही बहस छन् । झुठा आरोपमा थुनिएका बन्दी रिहाई । समृद्धि र सुशासनमा लैजाने आधार हुनुपर्छ । ठोस आधार हुनुपर्छ । अनिमात्रै सहकार्यको सम्भावना हुन्छ । हामीले जवाफ मागेका छौं । प्रारम्भिक वार्ता भएको हो । कार्यकारिणी समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।
बिहीबार १३, फागुन २०७७ १६:१५:२५ मा प्रकाशित